Ny lehilahy no lohan'ny tokantrano,na tsy miasa aza ve? - Dinika forum.serasera.org
Ny lehilahy no lohan'ny tokantrano,na tsy miasa aza ve?
Fitohizan'ny hafatra : Ny lehilahy no lohan'ny tokantrano,na tsy miasa aza ve?
Valiny : 102
niryna - 24/05/2008 06:19
Kristy no lohan''ny fiangonana ary toy izany ihany koa ny lehilahy no lohan'ny tokantrano.
Hoy ilay rangahy izay hoe raha sanatria ve ka voaroaka amin'ny asa ny vadinao ka hianao irery no miasa,moa ve mbola izy ihany no lohan'ny tokantranonao? Moa ve mbola voatazonao ihany ilay fitiavana nisy talohan'ny tsy niasa intsony sa miova,sorena hianao mahita azy tsy miasa?
Ahoana no hevitrareo,mbola toy ny teo aloha ihany ve ny fifandraisanareo sa miova?
Reraka miasa,mandoa ny zavatra rehetra,izy indray no mikarakara tokantrano fa tsy ilay vehivavy intsony .
Jeankely - 24/05/2008 07:24
Resaka Kristy eo @'ny Fiangonana sy ny mpivady angamba tsy tokony hifangaro. Ny tena tokatrano tsy ny vola no niorenany ary efa nohamasinina hiaraka hatramin'ny farany na ho mafy na ho mora. Mazava ho azy fa raha ny haren'ilay lehilahy no nanambadianao azy foana ny fitiavana azy rehefa lany ny harena na lasa kilemaina tampoka rangahy. Misy dikany ilay lohan'ny tokatrano fa tsy hoe mandidy manapaka akory no dikany raha ny fijeriko. Na manambola aza ny vehivavy dia misy izay hilany ny lehilahy. Sahala izay koa ny lehilay. Mifameno ny ao antokatrano. Ny fiainana "moderne" indray tsy hita fa ny tombontsoa no hivadiana mazava ho azy raha izay no izy dia lohany izy rehefa tompon'ny vola fa mangina rehefa tsisy vola. Tsy fanambadiana araka ny izy io angamba. Saingy raha lasa "materialiste" daholo ny olona dia tsisy azo ambara. Rehefa tsara tarehy ra-vehivavy izany nalaina vady. May simba ny tarehy ve dia tsy vady intsony ary lasa marikoriko ve ny fijery azy ?
ainaheri - 24/05/2008 08:54
Misy teny angamba izy zay refa anao mariazy iny we,na boka na kilemaina... (tsy haiko ny tohiny) Ny fitiavana no mitondra anio,raha sitrapo ny nahavotsitra ny asany ekena ,fa ra voaroaka nohon'ny sômazy teknika kosa alou d tokony handinika tsara ramatoa @ zay,na hita we mafy aza ny fiainana ka tsy mety raha ny 1 ihany no miasa!!
Tsy tokony hampihena ny fitiavana zany,ary betsaka ny tokantrano tojo an'io olana io, ary matetika mandé @ émission fa toa tsisy olana ,mivadika fotsiny ny role ,lery manao course,manatitra maka zaza,mikarakara tokantrano sns....Izany akory tsy midika we tsy lohan'ny tokantrano izy,eny ee... io arakarak'ilay rangah sy lay ramatoa iany kou io!!!
ravakamalala - 24/05/2008 12:49
raha fijery kristiana dia mazava ho azy, ny lahy foana no lohan ny tokantrano, na inon-kidona, na inon-kihatra, tsy conditionné-na inona na inona mihitsy io toe-javatra iray io.
Fa ny lehilahy koa anie na ataoko hoe sendra mandalo izany fotoana tsy hiasany izany, raha tena mahatsapa ny andraikiny sy ny adidiny eo anatrehan ny tokantranonay izy dia tsy hijanona ela amin izany fa tys maintsy hitady vahaolana haingana e!
Jeankely - 24/05/2008 13:31
Izay indrindra saingy somary nahagaga ny nampidirany an'i Kristy sy ny fiangonana ? Eto moa samy mametraka izay ao antsainy na zavatra zakan'ny loha no resana na tsy zaka dia sokafana ihany.
Koditra - 24/05/2008 13:45
ravakamalala: marina ny voalazanao, refa oé lohatokatrano d lohatokatrano, refa vtokatrano d vtokatrano :-D :-D :-D
Amiko lé oe lohany dia voalohany @fandraisana andraikitra na eo @tokatrano io na fiarahamonina na fianankaviana fa tsy midika oe rôle @tanàna akory ka ramatoa ndray zao no rôle satri rangah tsy miasa. Tsy any zany lé izy eh.
bor2lais - 24/05/2008 14:33
Izay indrindra saingy somary nahagaga ny nampidirany an\_'i Kristy sy ny fiangonana ? Eto moa samy mametraka izay ao antsainy na zavatra zakan\_'ny loha no resana na tsy zaka dia sokafana ihany.
Ho an\_'ny Kristiana dia io no zava-miafin\_'ny tokan-trano nolazain\_'i Paoly : toy ny maha lohan\_'ny Fiangonana an\_'i Kristy no maha-lohan\_'ny tokan-trano ny lehilahy. Izany hoe ny lehilahy dia tokony ho tia ny vadiny (tahaka ny fitiavan\_'i Kristy ny Fiangonana) ary ny vehivavy tokony hanaiky ny vadiny (tahaka ny aneken\_'ny Fiangonana an\_'i Kristy).
Jeankely - 24/05/2008 15:32
Nazavabe izan ny nahatsy kristianina ahy. :-D :-D :-D
milaibe - 24/05/2008 21:18
raha @ finoana ny hitondrana azy dia ny vehivavy fanaka malemilemy hoy ny ao @ baiboly( fanoharana ny mila tandremana ny firesaka ny fitondrana sns) sao vaky toy ny vazy) ary ny lehilahy no lohan`ny tonkatrano tsy tikony hisy ampiova ny firafitra ny aléas @ fiainana , fa raha olona tsy mpino indrindra fa @ firenena lazaina fa mandroso samy miasa samy mikarakara samy misy lanjany @ fanapahan-kevitra
rakapy - 25/05/2008 03:36
Amiko dia diso fijery sy fihevitra efa ela isika Gasy. Tsy misy lohany sy vodiny izany
raha ao an-tokatrano. Samy lohany ary samy vodiny daholo na ny lahy na ny vavy.
Rehafa atao mariazy ka mandidy ny mofo dia milaza hoe: miara-mandidy sy miara-manapaka isika! ka ahona indray no hoe ny lahy no lohany? Ny tokatrano dia fiaraha-miasa sy fiaraha -midinika fa tsy hoe didy avy @ lahy na ny vavy no ampiharina ao. Ary ny fanana asa(emploi) tsy midika ho maha lohany fa andraikitra
sy adidy atao mba hahasoa ny tokatrano.
Jeankely - 25/05/2008 07:14
Arakaraka io. Resaka Kristianina no manao ilay Jesosy no lohan'ny fiangona sns, ny Silamo koa ny lahy mbola avo kokoa, ny Hindu tena avo koa ny lehilahy. Ary na ny gasy tranainy dia misy ny hoe ankohovavy maneno fa ny lahy hatrany no lohany. Efa miova ny zzava-misy. Misy ny tsy mijery izay resaka fitiavana sy tokatrano fa ny vola no jerena aloha. Noho izany izay tompon'ny vola no lohany. Ireo resin'ny fivoarana no manaraka izay fa ireo mandala ny fomba teo aloha rehetra etsy ambony mbola mipetraka tsara fa ny lahy no lohany.
rakaroka - 25/05/2008 20:56
'zaho aloha dia miombon-kevitra 100 isan-jato amin-dRakapy.
Misy fomba azoko ankatoavina fa misy fomba tsy voatery iombonako fijery na
marina aza ny voalazan'i Jeankely fa maro ireo firehana manaso ny lahy.
tsoriko fa "MAHARIKORIKO MANKANDOA "ahy aza raha ny marina ny mahita lehilahy "maaaaaro" dia ireny "macho"men ireny, ary tsapako ilay izy fa vokatr'ity fisaina hoe lohany rizareo. Ny olana dia tsy mba loha laharana amin'ny "tsara" fa amin'ny toetra mamohehatra rehetra izao!
Matetika ny vhv, déjà efa nitondra sivy volana: ny ray maro mbola mialangalana raha mitaiza. D'autant plus mbola ny vhv no mamorona ny tsy misy matetika fa ny an-drizareo sahalan'ny vitan'ny miangetsana fotsiny ny fiainana ohatra hoe tsy "azoazony ny nahandro", ary anefa koa tsy nisasatra akory rizareo nahandro izany fa efa miandry masaka fotsiny aza!
Ny tokan-trano tsy hoe ny iray mpibaiko sy mpitsara fotiny, dia ny iray iharan'izany.
niryna - 25/05/2008 20:59
Resaka Kristy eo @'ny Fiangonana sy ny mpivady angamba tsy tokony hifangaro. Ny tena tokatrano tsy ny vola no niorenany ary efa nohamasinina hiaraka hatramin'ny farany na ho mafy na ho mora.
miombokevitra amin'izany koa aho.
Mazava ho azy fa raha any haren'ilay lehilahy no nanambadianao azy foana ny fitiavana azy rehefa lany ny harena na lasa kilemaina tampoka rangahy.
yap,misy manao io teneninao io,hano fa adala tompo.
Citation Misy dikany ilay lohan'ny tokatrano fa tsy hoe mandidy manapaka akory no dikany raha ny fijeriko. Na manambola aza ny vehivavy dia misy izay hilany ny lehilahy. Sahala izay koa ny lehilay. Mifameno ny ao antokatrano.
yap,ho tia anao aho ,na mahantra na manankarena,na farofy na ...manda-pihavin'ny fahafatesana.
Citation Ny fiainana "moderne" indray tsy hita fa ny tombontsoa no hivadiana mazava ho azy raha izay no izy dia lohany izy rehefa tompon'ny vola fa mangina rehefa tsisy vola.
sady llasa natao tsianjery fotsiny ilay voady teo ambony alitara.
Citation Tsy fanambadiana araka ny izy io angamba. Saingy raha lasa "materialiste" daholo ny olona dia tsisy azo ambara. Rehefa tsara tarehy ra-vehivavy izany nalaina vady. May simba ny tarehy ve dia tsy vady intsony ary lasa marikoriko ve ny fijery azy ?
izaho koa mba gaga.Tsy vitan'izany ihany koa fa antitra teo amin'ny fanompoana ny vady aman-janany ary lany teo ihany koa ny fahatanorana
misaotra jeankely a
niryna - 25/05/2008 21:06
hitakouh,tsy fidiny ho azy no nahavoroaka azy,ary mbola mitady asa izy fa tsy hipetraka eo,raha kamo be tenda indray dia hafa izay e
marina izany,rehefa natao hoe lohany izy dia aleo izy hitazona ny role eo ihany e
niryna - 25/05/2008 21:15
io ve tsy fijery rehetra mihitsy misy finoana manao ny vehivavy ho lohan'ny tokan-trano?
misy firenena maromaro rehefa tsy miasa ny olona dia mahazo fanampiana ara-bola,ara-tsakafo,sekoly,hofan-trano ny fianakaviana ary dia kamo tsy mety mitady asa intsony ilay olona.Ary eo no manomboka mipetraka ny olana satria leony ilay ramatoa mahita azy kamo,izay dia mety tsy azo omena tsiny ilay ramatoa ..
niryna - 25/05/2008 21:21
toa tsy any tokoa ilay izy,na inona mitranga dia tokony omena toerana ambony izy,ary mifanaja aloha fa tsy hoe izy irery..ralehilahy hajao ny vadinao...ravehivavy ,hajao ny vadinao..
Fa ny fanomezana azy hasina,lohan'ny tokantrano na inona mitranga no lazaiko eto.Maro ny vehivavy raha misy mahazo ny vadiny dia lasa izy indray no mitondra ny tokantrano,tsy manontany hevitra amin'ilay rangahy intsony izy fa tonga dia manao fanampahankevitra,ary misy aza tsy afaka miteny intsony na mba te hiteny aza ilay rangahy dia sakanany na tapenany tsy hiteny
niryna - 25/05/2008 21:22
Ho an'ny Kristiana dia io no zava-miafin'ny tokan-trano nolazain'i Paoly : toy ny maha lohan'ny Fiangonana an'i Kristy no maha-lohan'ny tokan-trano ny lehilahy. Izany hoe ny lehilahy dia tokony ho tia ny vadiny (tahaka ny fitiavan'i Kristy ny Fiangonana) ary ny vehivavy tokony hanaiky ny vadiny (tahaka ny aneken'ny Fiangonana an'i Kristy).
niryna - 25/05/2008 21:28
marina tokoa izany ary ny firenena manan-karena,ny vehivavy tsy mila mitambitamby na mahavita tena dia maro no misaraka satria noho ny tsy fitovizan'ny saina aloha voalohany indrindra,ny faharoa koa dia ao koa ny fahaizana tsy mitovy,ny tsy finoana moa manaraka eny ihany ,ary ny hoe fitovizan-jo ho an'ny lahy sy ny vavy dia miteraka fanapotehina ny tokantranon'ny maro mihitsy satria mitady hitovy ny toerana misy ny lahy ny vavy,maro ihany koa ...kanefa rehefa misy mahazo ny lehilahy dia manao ny asa ataon'ny vehivavy ao an-trano izy fa tsy mipetraka fotsiny akory :D
niryna - 25/05/2008 21:44
Voalaza ao amin'ny boky masina io,ka mety ho diso izany ny baiboly ,asa lahy
Ny fitenenana hoe ny lahy no lohan'ny tokantrano dia tsy midika izany hoe tsy manana andraikitra hanapakevitra ny vehivavy,tsy maintsy misy mpitarika avokoa ny zavatra rehetra,tsy maintsy misy lohany ihany koa."ny biby tsy manan-doha hono tsy mandeha".Hajaina ny lehilahy,omena azy ny hasina ,toy kristy no lohan'ny fiangonana
eny ,marina tokoa izany, hiarahana mifanaiky daholo ny zavatra rehetra,ny fanomezana loham-pianakaviana ny lehilahy dia fanajana azy,fa raha mahafantatra isika ny vehivavy no tena mahatonga ny tokan-trano andeha,ireo asa marobe miandry azy isan'andro ..
(omeo vady tsara aho hanorenako ny tokan-tranoko...ny lehilahy io)
Ny tovovavy....enga anie aho mba ahazo vady tsara. iza no haniry ahazo ny ratsy ?
Ny ohabolana 31 indray izay andraikitra tian'ny reny ho an'ny zanany hoe ahoana izany manorona tokantrano,ny vehivavy toa ny ahoana no tsara ho firavaky ny tokantrano.
Vehivavy hendry iza no hanana an'izany? Tsy mora ary tsy misy tongalafatra fa faniriana avokoa ireo,saingy ny lehilahy no lohany dia omena azy izany voninahitra izany sa ...
niryna - 25/05/2008 21:49
Arakaraka io. Resaka Kristianina no manao ilay Jesosy no lohan'ny fiangona sns, ny Silamo koa ny lahy mbola avo kokoa, ny Hindu tena avo koa ny lehilahy. Ary na ny gasy tranainy dia misy ny hoe ankohovavy maneno fa ny lahy hatrany no lohany. Efa miova ny zzava-misy. Misy ny tsy mijery izay resaka fitiavana sy tokatrano fa ny vola no jerena aloha. Noho izany izay tompon'ny vola no lohany.
mitombona izany,angaha vitan'izany ihany
fa raha miteraka aza ny firenena sasany ,toa manisy hasiny ilay zaza lahy izy no ny zazavavy( jereo ny sinoa).ny fanirian'ny olona hoe naniry zaza ka tera-dahy,ny fanomezana hasina ny lahy....oops ,maty eto aho ...
Ireo resin'ny fivoarana no manaraka izay fa ireo mandala ny fomba teo aloha rehetra etsy ambony mbola mipetka tsara fa ny lahy no lohany.